SAFFRON PEOPLE'S MOVEMENT: မြ၀တီ တိုက်ပွဲ သတင်းများစုစည်းတင်ပြမှု
မြ၀တီ တိုက်ပွဲ သတင်းများစုစည်းတင်ပြမှု
မြတီမြို့မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ တိုက်ပွဲ အခြေအနေတွေနဲ့ နောက်ဆုံးသတင်းတွေကို ရှယ်ယာလုပ်ပါတယ်။ တိုက်ပွဲတွေ ဆက်ဖြစ်မယ့် အခြေအနေတွေရှိနေပြီး အတည်မပြုနိုင်တဲ့ သတင်းတွေအရ နအဖ တပ်တွေက လူထုတွေကို ထွက်ခွါခိုင်းနေပြီး လေယာဉ်သုံးဖို့ အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ထိုင်းဘက်မှာတော့ လက်နက်ကြီး ကျည်ဆံကျရောက်မှုကြောင့် ထိခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လူနှစ်ဦးခန့်သေဆုံးပြီး ၆ဦးခန့် မဲ့ဆောက်ဆေးရုံမှာ တက်ရောက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ မြ၀တီ တံတားနဲ့ သိပ်မဝေးတဲ့ NEW LIGHT မိုက်ဂရန့်ကျောင်း ပေါ်ကို လက်နက်ကြီးကျည်တစ်ခု ကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ရာ ကံကောင်းထောက်မစွာဖြင့် သစ်ပင်ကိုထိမှန်ပေါက်ကွဲခဲ့သဖြင့် ထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပါ။ အခုအခါမှာတော့ ကမ်းနားက ထိုင်းနဲ့ မြန်မာမိုက်ဂရန့်ကျောင်းတွေ ပိတ်ထားလိုက်ပြီး၊ CDC ကျောင်းမှာ တက်နေတဲ့ မဲဆောက်ကမ်းနားဒေသ အနီးတိုက်မှာနေတဲ့ ကလေးတွေကို ကျောင်းကပဲ စောင့်ရှောက်ပေးထားရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ကမ်းနားဘက်က ထွက်ပြေးလာနေတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကိုတော့ ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေက လေဆိပ် အနားမှာပဲ ယာယီတဲတွေ ထိုးပြီး စောင့်ရှောက်ကူညီနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အချို့ကလဲ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေရရှိပါတယ်။
မြန်မာစံတော်ချိန်..... ၁ နာရီ ၄၅ မိနစ်၊
(၁ နာရီ ၅၆ မိနစ်) ကြံခင်းကျောင်းတိုက်ရှေ့ အာရှလမ်းမကြီးပေါ်နဲ့ ကြံခင်းလမ်းပေါ် လက်နက်ကြီးများ ပစ်ခတ်နေတယ်။ စက်သေနတ် စက်တိုက်ပစ်သံတွေ ကြားနေရတယ်။ မြ၀တီ ကြံခင်းဂိတ်ကနေ ထိုင်းဘက်ကို ထွက်ပြေးဖို့စောင့်နေတဲ့ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေကို ပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့ လှေက တစီးပဲရှိတယ်။
(၁ နာရီ ၃၈ မိနစ်) ပြန်ပစ်ပြီ.... မြ၀တီမြို့မှာ ဒီကေဘီအေ ဘက်က အင်အား ၅ဝဝ ကျော်လောက်က၊ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ချစ်ကြည်ရေးတံတားနဲ့ သိပ်မဝေးတဲ့ ကြံခင်းကျောင်းတိုက်ရှေ့ အာရှလမ်းမကြီးပေါ်နဲ့ ကြံခင်းလမ်းပေါ် လက်နက်ကြီးများ ပိုမိုပစ်ခတ်လာပါတယ်။ ခုနက ပစ်ခတ်ပြီးရပ်နားသွားပြီး ယခု မြန်မာစံတော်ချိန် ၁ နာရီ ၄၃ မိနစ် တရက်စက်ပစ်ခတ်နေတာပါ။ မြ၀တီမှ မဲဆောက်ကူးမည့် စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်များကို လှေဖြင့် ပို့ပေးမည့် သူမရှိတော့ပဲ မြ၀တီ ဘက်ကမ်းမှာ လှေကို စောင့်နေပါတယ်။
(၁ နာရီ ၃၂ မိနစ်) မြ၀တီမှ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များ ထွက်ပြေးလာနေကြပြီ။ မြ၀တီမြို့တွင်းမှ နအဖ စစ်တပ်မှ ထွက်ခွာချိန် ၄၅ မိနစ်ပေးထားရာ မိနစ် ၃၀ ရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ဒီကေဘီအေတပ်များနှင့် မွန်ပြည်သစ်ပါတီကတဘက်၊ နအဖ စစ်တပ်မှ ခြေလျင်တပ်ရင်း (ခလရ) ၂၈၄ တဘက် တဘက်နှင့်တဘက် အခြေအနေ တင်းမာမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း သိရှိရသည်။
ထိုင်းဘက်ခြမ်း ၊ မဲဆောက် တံတားထိပ် ဘယ်ဘက်ခြမ်း ရဲစခန်းရှေ့တွင် မြန်မာဘက်ခြမ်းမှ ပစ်ခတ်လိုက်သော လက်နက်ကြီး ထိမှန်မှုကြောင့် ကားတစ်စီး.. ပျက်စီးနေသော ပုံ။ ပေးပို့လာသူအား ကျေးဇူးတင်ပါသည်..
မနေ့က မြဝတီတံတားအောက်က ဟန်ရေးပြနေတဲ့ လုံခြုံရေးတွေ တစ်ယောက်မှ မရှိတော့ပါဘူး..
မနေ့က မြဝတီမြို့ သတင်းတွေ ဆက်တိုက် ဆိုသလို ပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့ မြဝတီမြို့မှာ ယနေ့မနက်ပိုင်းက ပစ်ခတ်သံများ ပြန်လည် ကြားနေရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်... မဲဆောက်နဲ့ မြဝတီမြို့များကို ဆက်သွယ် မေးမြန်းပြီး လက်လမ်းမှီသလောက် တင်ပြလိုက်ပါတယ်..
မဲဆောက်နေတစ်ဦး။....။ ယခုလက်ရှိ မဲဆောက်ဘက် အခြမ်းကမ်းနားမှာ မာရှယ်လောထုတ်ထားပါတယ်.. မဲဆောက်တံတားအနီးက ဖုန်းရုံနားမှာ RPG တစ်လုံးကျလာလို့ ဘုန်းကြီးတစ်ပါး..နဲ့ လူတစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိကြောင်း မြဝတီမြိုထဲမှာ မီးခိုးလုံးများ သေနတ်သံများကြားနေရကြောင်း ပြောဆိုပါတယ်..။ မြဝတီမြို့မှ ချောင်းကို ဖြတ်ကူးလာသူများအား ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများလုပ်ရန် သွားရောက်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း နာရေးကူညီမှုအသင်း မဲဆောက်မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးမှ ပြောဆိုပါတယ်..
မြဝတီမြို့ခံသံဃာတစ်ဦး.။ ...။ မနက်ကတည်းက RPG ၁၅လုံးလောက် ဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့ လမ်းမပေါ်ကျလာတယ်.. ဘုန်းကြီးတို့လည်းလမ်းပေါ် မထွက်ရဲဘူး... ခုမြို့ထဲမှာ စစ်တပ်နဲ့ DKBA ပဲရှိတော့တယ်.. ဘယ်သူက စပစ်တာလဲမသိဘူး...။ ခုတော့တံတားထိပ်က လုံခြုံရေး အစောင့်တွေ မရှိတော့ဘူး ဒဏ်ရာရ လူသေတာများတယ်ပြောတယ်. အပြင်ထွက်လို့မရကြတော့ဘူး. ထွက်တဲ့လူတွေ အပစ်ခံရတယ် ပေါ်တာလည်း စဆွဲနေပြီ အိမ်ဖုန်းလိုင်းတွေ အားလုံးဖြတ်ထားတယ် ဈေးဆိုင်တွေလည်း ပိတ်ကုန်ပြီ... ညဈေးဘက်ကနေ တောရကျောင်း. ကြံခင်းကျောင်းဘက်တွေမှာ လက်ရှိဖြစ်နေသေးတယ်...မြဝတီ အစိုးရနေရာများ DKBA ထိန်းချုပ်
Posted by saffrontoward at 2:39 PM
နိုင်ငံတကာသတင်းထောက်များ စုပေါင်သတင်းရယူပွဲ နိုင်င...
UP Date News about Myawaddy fighting between SOPDC...